စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ဆူဒန်ပြည်သူများ။ (အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၁)
နဂို အရပ်ဘက်အစိုးရ ပြန်လာရေး တောင်းဆိုချက်နဲ့ ပြည်သူများစွာဟာ ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ လမ်းတွေပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရထွက် ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ အောက်မှာ သန်းပေါင်းများစွာ ချီတက်ကြလို့ ခေါ်ဆိုတဲ့ ဒီကနေ့ စနေနေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်း ကော်မတီတွေက စီစဉ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ဘယ်လို အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ် နှိမ်နင်းနည်းကိုမဆို ရှောင်ရှားဖို့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ စနေနေ့ ဆန္ဒပြပွဲအပေါ် ကိုင်တွယ်ပုံက စစ်တပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြညွှန်းပါလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောပါတယ်။
“ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ် ရင်ဆိုင်တာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံသင့်ဘူး။ ဒါကြောင့်တော့ ကျနော်တို့က နောက်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တ်ို့ရဲ့ ပိုင်းဖြတ်ချက် ပိုတောင် ခိုင်လာပါလိမ့်မယ်။” လို့ ခါတွန်မြို့က Haitham Mohamed က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဆိုင်ရာ ကြေညာချက်အတွင်းက နိုင်ငံရေး အဖြေတရပ်ကို ရှာဖွေဖို့ ဘက်အားလုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိမြဲ ရှိနေပါတယ်လို့ ဆူဒန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Volker Perthes က သောကြာနေ့က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိအကျပ်အတည်းကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးကို ဦးတည်ပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် U.N. Integrated Transition Assistance Mission (UNITAMS) လို့ အင်္ဂလိပ်လို အတိုအားဖြင့် ခေါ်တဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ အားလုံးပါဝင် ကူးပြောင်းရေး အထောက်အကူပြု ကုလသမဂ္ဂ မစ်ရှင်အဖွဲ့က ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူ ၁၇၀ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့ ဆူဒန်ဆရာဝန်များ ကော်မတီက ဆိုပါတယ်။
အရပျသားအစိုးရကို ထောကျခံတဲ့ ဆူဒနျလူထု ခြီတကျဆန်ဒပွ
နဂို အရပျဘကျအစိုးရ ပွနျလာရေး တောငျးဆိုခကျြနဲ့ ပွညျသူမြားစှာဟာ ဆူဒနျနိုငျငံမှာ လမျးတှပေျေါထှကျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ စဈအစိုးရထှကျ ဆိုတဲ့ ကွှေးကွျောသံ အောကျမှာ သနျးပေါငျးမြားစှာ ခြီတကျကွလို့ ချေါဆိုတဲ့ ဒီကနေ့ စနနေေ့ ဆန်ဒပွပှဲကို ရပျရှာအသိုကျအဝနျး ကျောမတီတှကေ စီစဉျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနကွေတဲ့ ပွညျသူတှအေပျေါ ဘယျလို အကွမျးဖကျဖိနှိပျ နှိမျနငျးနညျးကိုမဆို ရှောငျရှားဖို့ အာဏာသိမျး စဈခေါငျးဆောငျတှကေို အမရေိကနျက တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ စနနေေ့ ဆန်ဒပွပှဲအပျေါ ကိုငျတှယျပုံက စဈတပျရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို ပွညှနျးပါလိမျ့မယျလို့ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန တာဝနျရှိသူတယောကျက ပွောပါတယျ။
“ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွသူတှကေို သနေတျနဲ့ပဈခတျ ရငျဆိုငျတာကိုတော့ ဘယျလိုမှ သညျးမခံသငျ့ဘူး။ ဒါကွောငျ့တော့ ကနြျောတို့က နောကျဆုတျမှာမဟုတျဘူး။ ကနြျောတို့ရဲ့ ပိုငျးဖွတျခကျြ ပိုတောငျ ခိုငျလာပါလိမျ့မယျ။” လို့ ခါတှနျမွို့က Haitham Mohamed က ရိုကျတာသတငျးဌာနကို ပွောပါတယျ။
ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံဆိုငျရာ ကွညောခကျြအတှငျးက နိုငျငံရေး အဖွတေရပျကို ရှာဖှဖေို့ ဘကျအားလုံးနဲ့ အဆကျအသှယျရှိမွဲ ရှိနပေါတယျလို့ ဆူဒနျနိုငျငံဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျ Volker Perthes က သောကွာနကေ့ ပွောပါတယျ။ လကျရှိအကပျြအတညျးကို ငွိမျးခမျြးစှာ ဖွရှေငျးနိုငျရေးကို ဦးတညျပွီး အားလုံးပါဝငျနိုငျတဲ့ ဆှေးနှေးပှဲ ဖွဈမွောကျအောငျ U.N. Integrated Transition Assistance Mission (UNITAMS) လို့ အင်ျဂလိပျလို အတိုအားဖွငျ့ ချေါတဲ့ ဆူဒနျနိုငျငံ အားလုံးပါဝငျ ကူးပွောငျးရေး အထောကျအကူပွု ကုလသမဂ်ဂ မဈရှငျအဖှဲ့က ပေါငျးစပျ ညှိနှိုငျးပေးနတေယျလို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။
စဈတပျရဲ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ လူ ၉ ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး အနညျးဆုံး လူ ၁၇၀ ဒဏျရာရခဲ့ကွတယျလို့ ဆူဒနျဆရာဝနျမြား ကျောမတီက ဆိုပါတယျ။